LinkedIn Inotangisa Linkedin Webhusaiti Demographics | Martech Zone
China, July 27, 2017 Chitatu, July 26, 2017 Douglas Karr
LinkedIn iri kubvarura yakanaka nyowani ficha mumavhiki anotevera anouya, LinkedIn Webhusaiti Demographics. Webhusaiti Demographics inoshandisa data kubva kuLinkedIn's mazana mashanu emamiriyoni nhengo kuti vape ruzivo kune vashanyi vewebhusaiti yekambani yako nenzira inoremekedza kuvanzika kwenhengo.
Inoratidzira iri nyore-kuverenga interface muLinkedIn Campaign Manager, Webhusaiti Demographics inokutendera kusefa yako webhusaiti vateereri neasere ehunyanzvi hwehunyanzvi, kusanganisira:
Webhusaiti Demographics inokutendera iwe kusefa nezera renji kuti unzwisise kana iwo uchangopfuura wekushambadzira mushandirapamwe wakasimudzira traffic kubva kune ako aunoda vateereri zvikamu. Chii chimwe, iwe unogona ikozvino kuona kana iwe wakwezva matsva matsva ezve tarisiro kuwebsite yako. Nedzidzo idzi, unogona kugadzira zvinyorwa zvitsva zvekushambadzira zvakagadzirwa kuti zvive nani kune vateereri.
Semuenzaniso, ngatiti iwe unomhanya kushambadzira kune iyo IT bhizinesi uye netsika kunongedza US-based tekinoroji vatungamiriri. Ukatarisa paWebhusaiti Yako Yehuwandu Hwevanhu, unoona kuti EMEA-based healthcare execute vari kushanyira chigadzirwa peji kupfuura zvawaifungidzira. Wakashongedzerwa neruzivo urwu, unogona kugadzirisa yako marongero ekushambadzira kunongedzera kune vachangobva kuwanikwa vateereri.
Webhusaiti Demographics iri kutipa isu mamwe mazano anobatsira nezve zvikamu zvakasiyana zvemawebhusaiti edu epasirese. Zviri kutibatsira kuti tinzwisise zvakajeka kana isu tiri kusvika kune chaipo vateereri nemawebhu edu ekushambadzira nzira uye zvakare ichipa kujekesa nezve edu ewebhu vateereri mukati meyese vatengi rehupenyu hupenyu. Bhanu Chawla, Musoro weDhijitari Strategic, Cornerstone OnDemand
LinkedIn Webhusaiti Demographics ndiko kusvetuka kukuru mukubatsira iwe kuita sarudzo dzakajeka dzekushambadzira kukura bhizinesi rako. Nekwaniso yekuunganidza mazano zvisati zvaitika, panguva kana mushure memushandirapamwe, iwe unogona kunatsiridza zano rako uye nekuita zvine hungwaru zvisarudzo zvekushambadzira.
Tags: Analyticskambanisaizi yekambaninyikadzidzindasitiribasa basabasa repamusoromusoro webasaLinkedInlinkedin webhusaiti huwandu hwevanhunzvimbowebhusaiti analyticshuwandu hwewebhu
Jul 31, 2017 na1: 52 PM
Hi Douglas Karr, Ndatenda zvikuru nekunyora nezve Linkedin Webhusaiti Demographics. Izvo zvichatibatsira isu zvakanyanya kushambadzira kwewebhu.